Baro soo jeedinta jiilaalka dayrta ee Fikirka Mu | Bezzia
Maria vazquez | 13/10/2021 18:00 | Maxaan xirtaa
Ma aha markii ugu horreysay ee aan ka hadalno Fikirka Mu, a shirkad fashion ah oo waarta kuwaas oo ujeedadoodu tahay in ay gacan ka geystaan ​​isticmaalka miyir -qabka iyo qunyar -socodka oo saamayn togan ku leh dadka iyo deegaanka. Mana aha markii ugu horreysay ee aan ku tusno soo jeedinta jiilaalka dayrta ee u taagan qaabkooda dabacsan iyo raaxada leh.
Dharka ka soo baxa qashinka Qashinka ayaa ka dhex muuqda Fikirka Mu ee ururinta jiilaalka dayrta, a mashruuc qashin eber ah kaas oo makiinadaha laga abuuro isku -dar ah fiiloyin laga soo helay agab dib -u -warshadayn iyo fiilooyin bikrad ah oo waara. Adiguna ma awoodi doontid inaad indhahaaga ka saartid soo jeedintooda corduroy iyo kuwa leh qaababka la hubiyay ee midabyada buluugga ah iyo tja.
2 Waxyaabaha muhiimka ah
Waxaan jecelnahay midabka midabka ee Fikirka Mu u doortay ururinta cusub. Oo waa kuwaa cagaarka, liinta, tiles iyo blues, Waxay u yimaadaan inay dharkayaga ka dhigaan xilliga dayrta-jiilaalka si ay u helaan cod wanaagsan oo farxad leh. Annagana, wax kasta oo weji fiican gelinaya cimilada xun had iyo jeer waxay u muuqdaan beddel weyn.
Marka mid la ogaado dharka qashinka qashinka, Ku-biirinta dhaqaalaha wareegtada dib-u-warshadaynta qayb aad u badan oo qashinka suufka ah oo ka samaysan dharka duugga ah iyo qashin-qubka kaymaha waara ee dib-loo-warshadeeyay, way fududahay in la qiyaaso ku-habboonaanta ay ku siin karaan nolol-maalmeedkaaga. Dharka fidsan ee feeraha leh iyo goonnada midi ee laastikada leh oo leh dhexda laastikada ayaa shaki la'aan ah qaybaha aan ugu jecel nahay.
Waxa kale oo fudud in la ogaado dharka corduroy suuf dabiici ah laga soo uruuriyay: dungareeso leh surwaal toosan oo toos loo jaray, surwaal dhererka canqowga ah, jaakadaha denim, goonno gaagaaban oo leh afar jeebood ... Dharka oo si fiican isugu daraya funaanadaha cilmi-nafsiga iyo dhogorta la hubiyay ee ka soo baxay liistadooda.
Oo aan la wadaagno kuwii hore ma dhimi karno inaan xusno dharka daahyada leh iyo blouses oo leh gacmo -galis, si aad ah u waafaqsan qaabka waddanka moodada ah iyo khadadka sidoo kale la xirtay xagaagan.
Ma jeceshahay Fikradaha Mu ee soo jeedinta jiilaalka?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Soo hel soo jeedinta jiilaalka dayrta ee Fikirka Mu